Dib u dhac mar kale ku yimid Doorashada Guddoonka Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Dib u dhac ayaa mar kale ku yimid Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa oo sida qorshaha uu ahaa la filaayay in maanta ay qabsoonto, maadaama jadwalkaasi ay go’aamiyeen xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran shirkii ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho.
Sida lagu balamay 22-ka Bisha oo maanta ku beegan ayaa loo madal sanaa in la qabto Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka, halka 28-ka Bishana balanta ay aheyd in la qabto Doorashada Madaxweynaha Somaliya.
Iskaba daa qaban qaabo ku aadan arimahaasi, weli waxaanan la dhaarin Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Somaliya oo la isugu yeeray inay ku soo xaadiraan Magaalada Muqdisho.
Dib u dhacyada Jadwalka Doorashada Somaliya ayaa iska noqotay wax caadi ah, maadaama in ka badan 5 mar dib ay u dhacday Doorashada Somaliya waqtigii loo balamay.
Madaxtooyada Somaliya oo sheeda ka daawanaysa dib u dhacyada Doorashooyinka Somaliya ayaa u aragta fursad wanaagsan oo ay ku sii raadsan karaan Xildhibaanada cusub ee Saaxada Siyaasada ku soo biiray si ay gor gortan ugala galaan codadka Xildhibaanada qiimaha ay ku iibsan doonaan.
Siyaasiyiinta Xildoonka ah ayaa dhowr mar ka digay dib u dhacyada noocaan oo kale ah ee ku imaanaya Doorashada Somaliya oo ilaa hada jadwal rasmi ah oo fadhiya aanan laheyn.
Musharaxiin kala duwan ayaa ku sugan Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo doonaya inay galaan gal Siyaasadeed ku dhex yeeshaan Xubnaha Baarlamaanka cusub ee dalka.
Doorashada Somaliya ee la hadal haayay inay dhaceyso sanadkan 2016, ayaa laga cabsi qabaa inay cagaha la gasho sanadka cusub ee 2017-ka oo maalmo ay inaga xigaan.
Hey’adda Culimada oo ka digay Ciyaaraha K/Kolayga Gabdhaha ee ka furmaya Garowe